Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ụgbọ mmiri abụọ na -akpọ Ocho Rios Jamaica n'izu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Njem njem ndị njem Jamaica
Jamaica Minista njem nleta, Hon. Edmund Bartlett, kpughere na ụgbọ mmiri abụọ ga -akpọ n'ọdụ ụgbọ mmiri Ocho Rios n'izu a. Mmepe a, Minista na -emesi ike, bụ ihe akaebe ọzọ na -achọwanye ịrị elu maka Jamaica na ihe ịga nke ọma nke mbọ iji mepee mpaghara njem.
MSC Meraviglia laghachiri n'ọdụ ụgbọ mmiri Ocho Rios na Tuesday, Septemba 21, maka oku mbụ n'ime oku ise ruo Nọvemba.
Carnival Sunrise ga -akwụsịkwa na Jamaica na nloghachi ya na Wenezdee, Septemba 22.
Site na nloghachi nke ndị mbata na -abata ọnụnọ kemgbe June 2020, Jamaica na -ahụ uto na -aga n'ihu na ụlọ ọrụ njem njem ụgbọ mmiri.
“Ihe nrite mmeri MSC Meraviglia na -alaghachi n'ọdụ ụgbọ mmiri Ocho Rios na Tuesday, Septemba 21, maka oku mbụ n'ime oku ise ruo Nọvemba. Agbanyeghị na ọ nwere ikike nke ihe dị ka ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri 7,000, ọ ga-eburu ihe dị ka mmadụ 2,833 n'ụgbọ n'ihi usoro COVID-19, "Minista Bartlett kọwara.
MSC Meraviglia bụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ikpeazụ kwụsịrị na Jamaica na mbido 2020 mgbe ọrịa COVID-19 kụrụ, na-amanye imechi ókèala mba agwaetiti ahụ.
Ụgbọ mmiri nke ọzọ na -akwọ ụgbọ mmiri maka Jamaica, ka ọ kwụsịkwa na Ocho Rios, bụ Carnival Sunrise na njem nloghachi ya na Wenezdee Septemba 22. Ọchịchị Carnival Sunrise bụ ụgbọ mmiri mbụ bịara agwaetiti a ka Jamaica mepegharịrị njem nlegharị anya na Mọnde, Ọgọst 16, ọ ga -akpọkwa oku 11 ruo December.
Minista Bartlett kwuru, "Mbupu ụgbọ mmiri dị oke mkpa maka mgbake nke ngalaba njem, anyị na -ahụkwa nnabata nnabata nke ụgbọ mmiri na -amata na Jamaica's Resilient Corridors na -enye ndị ọbịa anyị, ndị ọrụ njem na ndị mmadụ niile ọnọdụ nchekwa."
"Site na nloghachi nke ndị mbata na-abata ọnụnọ kemgbe June 2020, anyị na-ahụ uto na-aga n'ihu na ọkwa COVID-19 ugbu a na ụlọ ọrụ na-ebubata ụgbọ mmiri alọghachila, anyị na-atụ anya uto dị ukwuu na ọnụọgụ anyị," .
Maazị Bartlett kwuru na Jamaica kwadebere nke ọma maka oku ụgbọ mmiri dịka etinyere ihe niile achọrọ iji zute usoro iwu mba ụwa na nke ime obodo na ahụike COVID-19, yana ndị njem nwere oke ịkwaga n'ime Resilient Corridors.
“Ekwesịrị m ime ka ọ pụta ìhè na ụgbọ mmiri ndị ahụ ga-emerịrị usoro siri ike na-achịkwa ịmalitegharị ụgbọ mmiri, na-achọ ihe dị ka 95% nke ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ịgba ọgwụ mgbochi yana ka ndị njem niile nye ihe akaebe nke nsonaazụ na-adịghị mma sitere na nnwale COVID-19 emere n'ime. Oge awa 72 nke ịkwọ ụgbọ mmiri. N'ihe banyere ndị njem na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ọrịa, dị ka ụmụaka, a na -enye iwu nyocha PCR, a na -enyochakwa ndị njem niile ma nwalee (antigen) na ntinye, "Minista Bartlett kwusiri ike.
Dabere na usoro ihe omume ruo taa, Minista Bartlett kwuru na Jamaica na-atụ anya ihe dị ka oku ụgbọ mmiri iri abụọ tupu ngwụcha afọ.